काठमाडौं : बलत्कारपछि हत्याको प्रयास अभियोगमा हिरासतमा रहेका ४० वर्षीय भोला यादवले साविति बयान दिएका छन्। बलात्कारपछि छोरीको हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रहार गरेको उनले स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। माघ १३ गते राति करिब साढे १० बजेतिर बौद्धको जम्बु डाँडामा बस्दै आएका यादवले (झड्केली) छोरीको बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गरेका थिए। धनुषाको कमला नगरपालिका वडा…
झन्डा मेला हेर्न गएकी महिलाको बलात्कारपछि हत्या
महोत्तरी– महोत्तरीमा झन्डा मेला हेर्न गएकी एक महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको तथ्य खुलेको छ । गत १३ असोजमा झन्डा मेला हेर्न गएकी भंगहा-२ बखरी टोलकी ३५ वर्षीया अमृता सदाको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको हो । प्रहरीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सदाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा समातिएका दुईजनालाई सार्वजनिक गरेको हो । बलात्कारपछि हत्या घटनामा महोत्तरीको […]
Khabarhub 17 दिन पहिले
प्रदेश १ : आत्महत्या , हत्या र बलात्कारका घटना बढ्दो
प्रदेश १ मा हत्या , आत्महत्या र बलात्कारका घटना बढ्दो रुपमा पाइएको छ । प्रदेश १ प्रहरीको अपराध तथ्यांङक अनुसार गएको तीन वर्षमा हत्या, आत्महत्या र बलात्कार अपराध बढ्दो रहेको...
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन वर्ष पूरा
काठमाडौं। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ। तर अहिलेसम्म प्रहरीले हत्याकाण्डको वास्तविकता पत्ता लगाउन भने सकेको छैन। पटक–पटक छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिएको भएपनि प्रहरीले आफूहरु अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ। २०७५ साल साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मलाको शव ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।
३ असार, धनगढी । कैलालीमा छोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ परेका छन् । १० वर्षीया छोरीमाथि बलात्कार गरेर हत्या गरेको आरोपमा जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका-८ का ५१ वर्षीय पुरुषलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार जेठ २७ गते भैँसी गोठमा झुण्डिएको अवस्थामा बालिकाको शव […]
दमकमा प्रेमीले नै सेजलको बलात्कारपछि हत्या गरेको दाबी
झापा । झापाको दमकमा अध्ययनरत छात्रा सेजल कोइरालाको बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गरिएको छ । इलाम मंगलबारेकी सेजलको उनकै प्रेमीले बलात्कारपछि हत्या गरेको पीडित परिवारको दाबी छ । पीडित परिवारले मंगलबार इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा सेजलको बलात्कारपछि हत्या गरिएको दाबी गर्दै जाहेरी दिएको छ । “प्रहरी अनुसन्धान र पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि हत्या भएको देखाउछ” सेजलका... The post दमकमा प्रेमीले नै सेजलको बलात्कारपछि हत्या गरेको दाबी appeared first on Purbeli News.
म्याग्दी, २८ वैशाख: म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ मा वैशाख १४ गते भएको धाजेन्द्र पुनको हत्या र ११ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनामा संलग्न छ जनालाई मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक गरिँदै । तस्बिर : सन्तोष गौतम- रासस
काठमाडौं । उदयरपुरको रौतामाई गाउँपालिका–७ स्थित जंगलमा २७ वर्षीय महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । नवज्योति सामुदायिक वनमा जनावरले खाएको अवस्थामा महिलाको कंकाल फेला परेको छ । बलात्कारपछि उनको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले रौतामाई–७ घर भएका पवन अछामेलाई पक्राउ गरेको छ । २४ वर्षीय पवनले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्विकारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका इन्सपेक्टर छिरिङ शेर्पाले रातोपाटीलाई बताए ।चैत ११ मा साँझ पवनले मानसिक सन्तुलन गुमाएकी ती महिलालाई बलात्कारपछि ढुंगाले हिर्काएर
प्रहरीसमक्ष भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको दिनेशले स्वीकारे
काठमाडौं । बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानी की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्याको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका दिनेश भट्टले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसन्धान अधिकृतसामू बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान दिएका हुन् । ४ फागुनमा पक्राउ परेका उनले भट्टको हत्या गरेको स्वीकार गरेपनि बलात्कार भने... The post प्रहरीसमक्ष भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको दिनेशले स्वीकारे appeared first on Purbeli News.
२५ माघ, काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार नगरपालिका–७ मा १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल, बैतडीमा गरिएको पोष्टमार्टमबाट भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडी स्रोतका अनुसार पोष्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरुले भट्टको बलात्कार भएको देखिएको बताएका छन् । प्रतिकार गर्दा शरीरका टाउको र हातमा चोट […]
‘बलात्कारी, हत्यारा’लाई कारवाही गर्न अखिल (छैठौं) को माग
काठमाडौं । अखिल (छैठौं) ले बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष विमल पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बलात्कारी, हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो । घरबाट विद्यालय जान हिँडेकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको घर नजिकै जंगलमा शंकास्पद अवस्थामा शव भेटिएको थियो । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की १७ वर्षीया विद्यार्थी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्ययनरत भट्टको शव माघ २२ गते शरीरभरी निलडाम र लगाएका कपडा च्यातिएको अवस्थामा जंगलमा भेटिएको थियो । विद्यालयबाट घर नफर्केपछि भागरथीको खोजी गरिएको थियो । हामी भागरथी हत्याकाण्डको निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछौं । देशमा बारम्बार बालिकाहरुको बलात्कार र हत्याका घटना भइरहनु निकै गम्भीर विषय हो । बलात्कार र हत्याका घटना रोक्ने कार्यमा सरकार असफल भएको छ । कैयौं बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि कारवाही गर्ने काममा पनि सरकार असफल भएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई २ वर्षसम्म कारवाही गर्न नसक्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । भागरथी भट्टको बलात्कारी र हत्याराको तत्काल खोजी गरी कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौं । हत्यारालाई कारवाही गर्न आवाज उठाउन सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । भागरथीको हत्यारालाई कारवाही गर्नको लागि सञ्चालन हुने आन्दोलनहरुमा अखिल (छैठौं)को ऐक्यबद्धता रहने जानकारी गराउँछौं ।